TETIKASAN’NY FILOHAM-PIRENENA : Hahazo oniversite manara-penitra ny Faritra Sofia
Faritra maro manerana ny Nosy no hisitraka ireo fampanantenana nataon’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina. 10 septembre 2020
Tsy diso anjara amin’izany ny Faritra Sofia. Ankoatra ireo fotodrafitrasa atsangana ao an-toerana dia hahazo oniversite manara-penitra ihany koa ny Faritra Sofia.
Betsaka tamin’ireo velirano nataon’ny Filoha Andry Rajoelina no efa lasa fotodrafitrasa azo tsapain-tanana ankehitriny. Maro ireo Distrika sy Faritra nomeny fampanantenana no efa nahazo ny anjara fotodrafitrasam-pampandrosoana. Raha tsy hilaza fotsiny toy ny hopitaly manara-penitra, sekoly manara-penitra, kianja manara-penitra, lalana sy fotodrafitrasa isan-karazany miantoka ny fahatsaran’ny lafiny fambolena.
Raha tsiahivina dia vao haingana ihany koa ny Filoha no nanatanteraka ny fanamby nataon’ireo mponina tao amin’ny Kaominina Vohilengo. Ireto farany izay nampanantenainy fa omena fitaovam-pitanterana an-dranomamy na “baka” mba hahafahan’izy ireo mivezivezy sy mitatitra ny vokatra. Ny herinandro teo iny no tonga tany an-toerana nanatanteraka an’io teny nomeny io ny Filoha. Voaporofo fa ireo izay nampanantenainy dia tsy maintsy tanteraka, saingy tsy maintsy miandry amin’ny fotoanany fotsiny.
Ny Faritra Sofia dia isan’ireo Faritra tsy diso anjara tamin’ny fampanantenana nataon’ny Filoha. Maro ireo fotodrafitrasa efa haorina eo anivon’ireo Distrika mandrafitra ny Faritra. Ny tena zava-dehibe indrindra amin’izany dia ny fananganana oniversite any an-toerana. Hatramin’izay dia tsy maintsy mihazo ny renivohi-paritany toa an’Antsiranana, Antananarivo na Mahajanga ireo zanaky ny Faritra mahazo ny mari-pahaizana bakalorea. Betsaka amin’izy ireo no voalaza fa tsy mahavita manohy ny fianarany intsony rehefa nahavita ny kilasy famaranana noho ny tsy fahampiana eo amin’ny ray aman-dreny.
Tsy ho ela intsony dia ho afa-pahasahiranana tanteraka izy ireo, aorian’ny fahavitan’ity oniversite manara-penitra ity dia tsy mandeha lavitra intsony izy ireo. Ny fiandohan’ity herinandro ity no nidina tao amin’ny Kaominina Anahidrano, ao anatin’ny Distrikan’Antsohihy ireo tompon’andraiki-panjakana notarihin’ny Governoran’ny Faritra, Jeneraly Lylison René nijery ny tany hanorenana ny fotodrafitrasa. “Rehefa nifampidinika ny Raiamandreny, ny sojabe sy teo anivon’ny Faritra Sofia dia tapaka fa eto Anahidrano, tanànan’ny Filoha Philbert Tsiranana no hanorenana izany oniversite manara-penitra izany. Tsy nisalasala ireo Raiamandreny eto Anahidrano nanome tany malalaka hananganana izany. Nahafeno ny fepetra rehetra amin’ny fananganana izany fotodrafitrasa izany ny Kaominina Anahidrano”, hoy ny fanazavan’ny Governoran’ny Faritra Sofia.
Raha ny tetikasan’ny Filoham-pirenena dia maherin’ny dimy ny isan’ireo oniversite manara-penitra no hatsangana eto Madagasikara. Tanjona ny hanatsarana ny fanabeazana ary mba hanalana fahasahiranana ireo mpianatra isam-paritra.